शेयरमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ ? यी कुरा याद राख्नोस | Makalukhabar.com
शेयरमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ ? यी कुरा याद राख्नोस
कात्तिक २९, काठमाडौं । प्रत्येक क्षेत्रको आ—आफ्नै शब्दावली भएसँगै धितोपत्र बजारका पनि बेग्लै शब्दावली रहेका हुन्छन् । सेयर लगानी गर्ने क्रममा यस्ता शब्दले नयाँ लगानीकर्ताहरुलाई अफ्ठयारो स्थिति सिर्जना हुने भएका कारणले नयाँ लगानीकर्ताहरुलाई सहजताका निम्ति सेयरसँग सम्बन्धित शब्दावलीहरु बारे तल चर्चा गरिएको छ ।
धितोपत्र बजार शव्दाबली
साधारण शेयरमा दिइने लाभांशको दर निश्चित हुँदैन र कम्पनीले आर्जन गर्ने नाफाको घटबढ अनुसार यो पनि घटिवढी हुन सक्छ ।
कम्पनीले आर्जन गरेको नाफाबाट अग्राधिकार शेयरवालाहरुलाई तोकिएको दरमा लाभांश वितरण गरिसकेपछि बाँकी हुन रकमबाट लाभांश वितरण गरिने गरी जारी गरिएको धितोपत्रलाई साधारण शेयर भनिन्छ । साधारण शेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुलाई आफ्नो लगानीको मात्रानुसार सम्बन्धित कम्पनीको स्वामित्व प्राप्त हुन्छ र उनीहरुलाई कम्पनीको स्वामी (Owner) मानिन्छ । कम्पनीको स्वामीको हैसियतले साधारण शेयरवालाहरुले बढी जोखिम उठाउनुपर्दछ ।
साधारण शेयरमा दिइने लाभांशको दर निश्चित हुँदैन र कम्पनीले आर्जन गर्ने नाफाको घटबढ अनुसार यो पनि घटिवढी हुन सक्छ । अर्काेतर्फ कम्पनीले नाफा आर्जन गर्दैमा साधारण शेयरवालाहरुलाई लाभांश प्राप्त हुन्छ भन्ने हुँदैन अर्थात साधारण शेयरमा लाभांश दिनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था हुँदैन । तर कम्पनीले जति बढी नाफा आर्जन गर्दछ, उति नै बढी दरमा लाभांश प्राप्त हुने सम्भावना भने रहन्छ । साथै लाभांशको रुपमा कम्पनीले साधारण शेयरवालाहरुलाई बोनश शेयर पनि वितरण गर्न सक्छ ।
सम्बन्धित कम्पनी खारेजीमा गएको अवस्थामा डिवेञ्चरवालाहरु र अग्राधिकार शेयरवालाहरुलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम भुक्तानी गरिसकेपछि बाँकी रहेको रकम मात्र साधारण शेयरवालाहरुले दावी गर्न सक्छन् । यस कारण साधारण शेयरमा गरिने लगानीलाई जोखिमपूर्ण मानिएको छ । बढी प्रतिफल प्राप्त गर्न बढी जोखिम पनि उठाउन तयार हुने लगानीकर्ता (Aggressive Investor) का लागि मात्र साधारण शेयर जस्तो धितोपत्रको औजार उपयुक्त मानिन्छ ।
हालको प्रचलित ब्यवस्था अनुसार साधारण शेयरको अंकित मूल्य साधारणत रु. १०० रहेको छ । कथंकदाचित सम्बन्धित कम्पनी खारेजीमा गई ठूलो दायित्व ब्यहोर्नुपर्ने भएमा पनि साधारण शेयरवालाहरुको दायित्व उनीहरुले लगानी गरेको रकमसम्ममै सिमित हुन्छ र आफ्नो घरघरानाबाट ब्यहोर्नु पर्दैन ।
विगतमा सर्वसाधारणमा साधारण शेयर निष्काशन गरिसकेको कम्पनीले भविष्यमा पुनः साधारण शेयर निष्काशन गर्ने भएमा त्यसरी निष्काशन गरिने शेयरहरु खरीद गर्ने पहिलो हक विद्यमान शेयरवालाहरुलाई प्राप्त हुन्छ । यस प्रकार पुनः निष्काशन गरिने शेयरमा विद्यमान शेयरवालाहरुको पहिलो हक हुने भएकोले त्यस्तो शेयरलाई हकप्रद शेयर भनिन्छ । हकप्रद शेयर खरीद गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्न विद्यमान शेयरवालाहरु स्वतन्त्र हुन्छन् । विद्यमान शेयरवालाहरुले आफूले पहिले खरीद गरेको शेयरको अनुपातमा हकप्रद शेयर खरीद गर्ने अधिकार प्राप्त गर्दछन् ।
कम्पनीले आर्जन गरेको मुनाफाबाट तोकिएको दरमा लाभांश वितरण गर्ने गरी जारी गरिएको शेयरलाई अग्राधिकार शेयर भनिन्छ । कम्पनीले वितरण गर्ने लाभांश सम्बन्धमा साधारण शेयरवालाको भन्दा अग्र अधिकार हुने हुनाले नै यसलाई अग्राधिकार शेयर भनिएको हो । यस्तै कम्पनी खारेजीमा जाने भएमा पनि आफ्नो लगानी र सञ्चित लाभांश प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा अग्राधिकार शेयरवालाहरुको अग्राधिकार हुन्छ । यसै कारण अग्राधिकार शेयरमा गरिने लगानीलाई तुलनात्मकरुपमा कम जोखिमपूर्ण मानिएको छ । तर सम्बन्धित कम्पनीले कुनै वर्ष नाफा आर्जन गर्न नसकेमा अग्राधिकार शेयरवालाहरुले तोकिएको दरमा लाभांश प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।
अर्कोतर्फ कम्पनीले जतिसुकै नाफा आर्जन गरेता पनि अग्राधिकार शेयरवालाहरुले तोकिएको दरभन्दा बढी लाभांश प्राप्त गर्न सक्दैनन् । यस प्रकार अग्राधिकार शेयरमा गरिने लगानीमा जोखिम पनि कम र प्रतिफल पनि कम हुन्छ । अग्राधिकार शेयरवालाहरुले आफ्नो हकहितसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल हुने अवस्थामा वाहेक अन्य अवस्थामा कम्पनीको वार्षिक साधारण सभामा भाग लिन पाउँदैनन् । अग्राधिकार शेयरलाई मिश्रित प्रकृतिको धितोपत्रको रुपमा लिइन्छ किनभने यसमा साधारण शेयर तथा डिवेञ्चर दुवैको विशेषता पाइन्छ ।
अग्राधिकार शेयरहरु सञ्चयशील (कुनै वर्ष कम्पनी नोक्सानमा गई लाभांश भुक्तानी गर्न नसक्दा लाभांश सञ्चय भै आगामी वर्षको नाफाबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने) वा असञ्चयशील, विमोच्य (निश्चित समयावधि पछि फिर्ता भुक्तानी दिइने) वा अविमोच्य र परिवर्तनशील (निश्चित समयावधि पछि साधारण शेयरमा परिवर्तन गर्न सकिने) वा अपरिवर्तनशील प्रकृतिका हुन्छन् ।
डिवेञ्चरमा प्रायः जोखिम लिन नचाहने लगानीकर्ताहरु लगानी गर्न रुचाउँदछन् ।
तोकिएको दर र समयमा साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्ने शर्तमा जारी गरिएको धितोपत्रलाई डिवेञ्चर भनिन्छ । यसको अंकित मूल्य साधारणतः रु.१००० हुन्छ । डिवेञ्चरवालाहरुले आफूले गरेको लगानी रकममा तोकिएको दरमा वार्षिक वा अर्धवार्षिकरुपमा ब्याज प्राप्त गर्दछन् । साधारण शेयर र अग्राधिकार शेयरमा लाभांश दिनु अघि नै डिवेञ्चरवालाहरुले ब्याज प्राप्त गर्दछन् । संगठित संस्था नोक्सानीमा गए पनि डिवेञ्चरवालाहरुले तोकिएको ब्याज प्राप्त गर्न कुनै वाधा पर्दैन ।
डिवेञ्चरवाला र संगठित संस्थाको सम्बन्ध साहु र ऋणीको जस्तो हुन्छ । कथंकदाचित कम्पनीले तोकिएको दर र समयमा ब्याज प्रदान गर्न असमर्थ भएमा डिवेञ्चरवालाहरुले कम्पनी खारेजीमा पठाउन कार्यवाही चलाउन सक्छन् । डिवेञ्चरमा प्रायः जोखिम लिन नचाहने लगानीकर्ताहरु लगानी गर्न रुचाउँदछन् । डिवेञ्चरवालाहरुलाई कम्पनीको वार्षिक साधारण सभामा सहभागी हुने अवसर र मतदान अधिकार प्राप्त हुँदैन ।
डिवेञ्चरहरु सुरक्षित (कम्पनीको सम्पत्ति जमानत वा बन्धक राखी निष्काशन हुने) वा असुरक्षित, विमोच्य (निश्चित समयावधि पछि फिर्ता भुक्तानी दिइने) वा अविमोच्य र परिवर्तनशिल (निश्चित समयावधि पछि साधारण शेयरमा परिवर्तन गर्न सकिने) वा अपरिवर्तनशील प्रकृतिका हुन्छन् ।
लाभांश र बोनश शेयर
कुनै निश्चित समयमा तोकिएको संख्या र मूल्यमा साधारण शेयर खरीद गर्न सकिने गरी जारी गरिएको धितोपत्र औजारलाई वारेन्ट भनिन्छ । अर्को शब्दमा भविष्यमा कम्पनीको साधारण शेयर खरीद गर्न लगानीकर्ताहरुलाई दिइएको अधिकारनै वारेन्ट हो । सामान्यतः बण्डको निष्काशनलाई लगानीकर्ताहरु समक्ष आकर्षक गराउन बण्डसँगै वारेन्ट पनि दिइन्छ । भविष्यमा गएर वारेन्ट प्रयोग गरी साधारण शेयर लिने वा नलिने विकल्प सम्बन्धमा निर्णय लिन लगानीकर्ता स्वतन्त्र हुन्छ ।
वारेन्ट प्रयोग गर्दा यो साधारण शेयरमा परिवर्तन हुन्छ तर बण्ड भने जस्ताको तस्तै रहन्छ । वारेन्ट निष्काशन गर्दा भविष्यमा साधारण शेयर खरीद गर्नका लागि भुक्तानी गर्नुपर्ने मूल्य (Exercise Price), वारेन्ट प्रयोग गरी साधारण शेयर प्राप्त गर्न सकिने अनुपात (Exercise Ration) र वारेन्ट प्रयोग गरिसक्नुपर्ने समयावधि जस्ता कुराहरु खुलाइएको हुन्छ ।
ब्लू चिप शेयर
धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली
प्राथमिक बजारमा निष्काशन हुने धितोपत्रहरुको बिक्री नभएमा त्यस्तो धितोपत्रहरु खरीद गर्ने कवुलियत गर्नुलाई धितोपत्रको प्रत्याभूति भनिन्छ । प्रत्याभूतिकर्ताले धितोपत्रको प्रत्याभूति गरे वापत सम्बन्धित निष्काशनकर्ता कम्पनीबाट सम्झौता बमोजिमको शूल्क प्राप्त गर्दछन् ।
धितोपत्रको अधिक र न्यून माग
धितोपत्र निष्काशन गरिने मूल्य र अंकित मूल्य विचको फरकलाई भनिन्छ । धितोपत्रको अंकित मूल्य भन्दा बढी मूल्यमा धितोपत्र निष्काशन गरिएको अवस्थालाई Premium मा धितोपत्र निष्काशन गरिएको भनिन्छ ।
खरीद प्रस्ताव तथा बिक्री प्रस्ताव मूल्य
कुनै सम्भावित खरीदकर्ताले तिर्न चाहेको धितोपत्रको मूल्यलाई इााभच एचष्अभ भनिन्छ । धितोपत्र बजारको कारोबार पाटीमा धितोपत्र दलालहरुद्वारा अंकित गराइएको मिलेपछि धितोपत्र खरीद बिक्री कारोबार सम्पन्न हुन्छ ।
सूचीकृत धितोपत्रको चुक्ता मूल्य
धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत सम्पूर्ण धितोपत्रहरुको बजार मूल्यको कूल जोडलाई बजार पूँजीकरण भनिन्छ । बजारमा सूचीकृत धितोपत्रहरुको संख्या र तिनको आ–आफ्नो बजार मूल्य गुणन गरी जोड्दा बजार पूँजीकरण प्राप्त हुन्छ ।
सूचीकृत धितोपत्रहरुको आजको कूल बजार मूल्य र कुनै आधार वर्षको कूल बजार मूल्य बीचको अनुपात नै बजार परीसूचक हो । सूचीकृत धितोपत्रहरुको मूल्य बढेमा यो परीसूचक बढ्दछ भने घटेमा घट्दछ । नेपालमा नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लि. ले प्रत्येक दिन यस प्रकारको परीसूचक तयार गर्दछ, जसलाई बजार परिसूचक भनिन्छ ।
प्रतिशेयर बजार मूल्य
कम्पनीले आर्जन गरेको खुद नाफालाई कम्पनीको कूल शेयर संख्याले भाग गर्दा प्रतिशेयर आम्दानी प्राप्त हुन्छ । प्रतिशेयर आम्दानीले शेयरवालाहरु तथा कम्पनी भन्दा बाहिरका ब्यक्तिहरुका लागि नाफाको महत्वपूर्णमा प्रदान गर्दछ । प्रतिशेयर आम्दानी बढ्दै गएको कम्पनीलाई कार्य सम्पादनमा सफल कम्पनी मानिन्छ भने प्रतिशेयर आम्दानी घट्दै गएमा समस्याको लक्षण मानिन्छ ।
मूल्य सम्वेदनशील सूचना
अधोन्मुख र उन्नतोन्मुख धितोपत्र बजार
धितोपत्रको उन्नतोन्मुख बजार (Bull Market) भन्नाले बजारको क्रमिकरुपमा उभो लाग्दै गरेको स्थितिलाई जनाउँछ । यस प्रकारको बजारमा उद्योग, बैकिङ्ग, बीमा लगायत अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रको सुधार सँगसँगै कम्पनीमा कुशल ब्यवस्थापनका कारण नाफामा क्रमशः वृद्धि भएको हुन्छ । यस वेला सूचीकृत कम्पनीहरुको शेयरको मूल्य बढी रहेको हुन्छ । अर्को तर्फ धितोपत्रको अधोन्मुख बजार (Bear Market) भन्नाले बजारको गिर्दो अवस्थालाई जनाउँछ । यस स्थितिमा सूचीकृत धितोपत्रहरुको बजार मूल्य र बजार परीसूचक (Market Index) घट्दो प्रवृत्तिमा रहेको हुन्छ र लगानीकर्ताहरुमा निराशाको वातावरण रहन्छ ।
सञ्चालकहरु र सञ्चालक समिति
वार्षिक साधारण सभा
दुहवीमा प्रथम मेयर कप फुटवल प्रतियोगिता सुरु
सागरनाथ वनमा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
सुनचाँदीकै भाउ स्थिर, यस्तो छ आजको भाउ
मंसिर २५, काठमाडौँ । बुधबार नेपाली बजारमा सुनचाँदीकै भाउ स्थिर भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । मंगलबार प्रतितोला ७० हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छापावाल सुन आज पनि सोही भाउमा कारोबार भईरहेको महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार मंगलबार प्रतितोला ७० हजार ५ सयमा कायम भएको तेजवी... जारी राख्नुहोस...
सागमा भ्रष्टाचार भएको तरुणदलको आरोप, खेलकुदमन्त्री र राखेप सचिवलाई बर्खास्त गर्न माग
मंसिर २५, काठमाडौँ । नेपाल तरुण दलले १३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुदमा स्वर्ण पदक जित्ने खेलाडीहरुलाई जनही २५ लाख रुपैंया प्रदान गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै रजत पदक जित्नेलाई जनही १५ लाख र कास्य पदक जित्नेलाई जनही १० लाख रुपैैंया पुरस्कार प्रदान गर्न माग गरेको छ । नेपाली काँग्रेसको भ्रातृ संगठन तरुण दलका... जारी राख्नुहोस...
सुनचाँदीकै भाउ घट्यो, हेर्नुस् आजको भाउ
मंसिर २४, काठमाडौँ । मंगलबार सुनको भाउमा तोलमा २ सय रुपैयाँ घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । सोमबार प्रतितोला ७१ हजार कायम भएको छापावाल सुन आज तोलामा २ सय रुपैयाँ घटेर प्रतितोला ७० हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको महासंघले जनाएको छ ।महासंघका अनुसार सोमबार प्रतितोला ७० हजार ७ सय र... जारी राख्नुहोस...
आयोगको संस्थागत रणनीतिक योजना सार्वजनिक
मंसिर २३, काठमाडौं । भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आगामी संस्थागत रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको छ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको प्रमुख आतिथ्यमा उक्त योजना सार्वजनि गरिएको हो । सो अवसरमा आयोगका प्रमुख आयुक्त एवं आयुक्तहरु, विभिन्न स... जारी राख्नुहोस...
आज पनि घट्यो सुनको भाउ, किन्ने होईन ?
मंसिर २३, काठमाडौँ । नेपाली बजारमा आज सुनको भाउ तोलामा २ सय रुपैयाँ घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । साताको पहिलो दिन आईतबार प्रतितोला प्रतितोला ७१ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छापावाल सुन आज तोलमा २ सय घटेर प्रतितोला ७१ हजार कायम भएको महासंघले जनाएको छ । त्यसैगरी आज तेजाबी स... जारी राख्नुहोस...
हवाई यात्रामा विदेशीलाई तीन गुणा बढी भाडा, नेपालीकाे बराबरीमा ल्याउन सुझाव
मंसिर २२, काठमाडौं । सरकारी अध्ययन समितिले हवाई टिकटको मूल्य नेपाली र विदेशी नागरिकलाई समान बनाउन सुझाव दिएको छ । पूर्वपर्यटन सचिव सुरेशमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित आठ सदस्यीय कार्यदलले पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा समान भाडादर बनाउन सुझाव दिएको हो । विदेशी नागरिकलाई नेपालमा ड... जारी राख्नुहोस...
साताको पहिलो दिन आईतबार सुनचाँदीकै भाउ घट्यो
मंसिर २१, काठमाडौँ । साताको पहिलो दिन आज आईतबार सुनचाँदीकै भाउ घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । साताको अन्तिम दिन शुक्रबार प्रतितोला ७१ हजार ७०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावा सुन आज तोलामा ५ सय रूपैयाँ घटेर प्रतितोला ७१ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको महासंघले जनाएको छ । त्यसैगर... जारी राख्नुहोस...
चार अनुसन्धानकर्ता ‘नबिल विज्ञान प्रविधि पुरस्कार’ बाट सम्मानित
मंसिर २२, कठमाडौं । राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानले चार जना वरिष्ठ अनुसन्धानकर्तालाई ‘नबिल विज्ञान तथा प्रविधि पुरस्कार’ बाट सम्मानित गरेकोे छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री तथा नास्टका सहकुलपति गिरीराज मणि पोखरेलले बिहीबार सो पुरस्कारबाट चारजनालाई स्मान गरेका हुन् । सम्मानित हुनेमा... जारी राख्नुहोस...
नेपालमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने अमेरिकन पत्रकारकाे ‘फर्मुला’
काठमाडौं, २१ मंसिर । क्रिस्टोफर फाउण्डेशन नेपालले भ्रमण वर्ष–२०२० सफल बनाउनको लागि सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै फाउण्डेशनले नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० मा नेपालमा कसरी २० लाख पर्यटक भित्र्याउने भनेर सरकारलाई आफ्नो तर्फबाट थप सहयोग पुर्याउने भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा म... जारी राख्नुहोस...
यस साता शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक उकालो
मंसिर २१, काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा यस साता शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक उकालोको यात्रामा देखिएको छ । शेयर कारोवार हुने पाँच दिन मध्ये दुई दिन नेप्सेले नयाँ यात्रा तय नगरे पनि पछिल्ला तीन दिन भने बजार सुधारात्मक दिशामा अगाडि बढ्दा नेप्सेले समेत गति लियो । साताभर कूल १७२ कम्पनीको शेयर कारोवार भय... जारी राख्नुहोस...
डिएभी स्कूल वीरगंजको २६औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न
हिंसा न्यूनिकरण गर्न विद्यालय कक्षा संचालन गर्नु पर्नेमा जोड
मंसिर पूर्णिमा “दिन एक पर्व अनेक”
सबैभन्दा कम उमेरमा पढाइ सक्न लागेका नौ वर्षीय बालकले यस कारण छाडे विश्वविद्यालय
बिराटनगरमा नेपाल अग्रवाल युवा मञ्चको मैत्रिपूर्ण क्रिकेट हुँदै
१३ सागः नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई २३ स्वर्णसहित १०३ पदक
नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माणको तयारी शुरु